Various - Izaho dia avy amin'ny Mac | Avy amin'ny Mac aho (Pejy 5)
Ny atiny audiovisual tany am-boalohany an'i Apple dia kasaina hanombohana manomboka ny volana martsa 2019. Azo inoana fa hanomboka aloha kokoa ny fampielezam-peo amin'ny atiny fahatelo.
Tim Cook dia iray amin'ireo mpandahateny lehibe tamin'ny Development Forum, natao tany Sina. Nasehony ny fomba fijeriny ny politika amerikanina momba ny varotra ivelany.
Jim Reekes no mpamorona tamin'ny taona 80 ny sasany amin'ireo gadona malaza an'i Apple, ao anatin'izany ny feo Mac Startup. Fantatsika ny tantarany
Fanatsarana ny Safari Copy & Paste amin'ny fanavaozana macOS 10.13.4 manaraka
Mahafantatra fivoarana vaovao mifandraika amin'ny asan'ny Copy and Paste izahay, izay ho hitantsika amin'ny kinova farany an'ny macOS High Sierra 10.13.4
Manantena i Apple fa hanitsy ara-potoana ny varotra noho ny faktioran'ny serivisy
Manantena i Apple fa hanitsy ara-potoana ny varotra fitaovana amin'ny alàlan'ny fivarotana serivisy toa ny iTunes, AppleCare, Apple Pay. Ity fizarana ity dia mitombo amin'ny taha 13%
Mitadiava rakitra dika mitovy amin'ny Mac miaraka amin'ny app DupeGuru
Manolotra an'i DupeGuru izahay, ilay fisie fisie azo adika azo ovaina, miaraka amin'ny fahafantarana ny habetsaky ny kisendrasendra amin'ny rakitra iray hafa.
Apple dia mijanona eo amin'ny lampihazon'ny mpividy chip sy semiconductor lehibe indrindra amin'ny 2017, aorian'ny Samsung
Araka ny angon-drakitra noforonin'i Gartner, ny Apple Inc no orinasa nividy fitaovana chip indrindra taorian'ny Samsung, ...
Apple dia manohana atrikasa aorian'ny famokarana horonantsary amin'ny alàlan'ny fanomezana lisansa Mac maro sy Final Cut Pro X
Apple dia manohana vondrona mpamokatra sarimihetsika miaraka amin'ny Mac, fakan-tsary ary Final Cut Pro X amin'ny fanaovana short. Mihaona amin'ireo mpitantana fampiofanana sy talen'ny sarimihetsika ny mpandray anjara
Fomba fanakatonana fampiharana macOS marobe amin'ny fotoana iray
Fampianarana momba ny fomba hanakatonana rindranasa marobe miaraka amin'ny macOS ho an'ny rafitra fiasa rehetra, raha toa ka voasakana ny fampiharana iray.
Herinandro iray indray no tadiavinay hizara aminao ny #podcastapple isan-kerinandro ary amin'ity indray mitoraka ity ny vaovao ...
Adobe dia manavao ny Photoshop CC sy Adobe XD CC miaraka amin'ny fiasa Sensei vaovao
Adobe dia namoaka fanavaozana vaovao ny Photoshop CC sy Adobe XD CC miaraka amin'ny fampidirana ireo asan'ny Sensei vaovao sy vaovao hafa manokana.
Apple dia namoaka beta voalohany an'ny macOS High Sierra 10.13.4 ho an'ny mpamorona
Andro iray monja taorian'ny famoahana ny kinova vaovao an'ny macOS High Sierra 10.13.3 rafitra, Apple dia manohy ...
Fanavaozana ny fiarovana ny macOS Sierra sy El Capitan, ny fanamboarana ho an'i Meltdown sy ny Spectre
Ireo avy amin'ny Cupertino dia nandefa fanavaozana fiarovana lehibe ho an'ireo mpampiasa izay noho ny antony tsy manana ny kinova ...
Ny HomePod dia tsy hanana ny endri-javatra rehetra amin'ny fanombohany ny tsena
Ny kinova voalohany an'ny HomePod dia tsy hanana fiasan'ny feo hanondroana amin'ny mpandahateny ny famerenana feo isan-karazany amin'ny HomePod tsirairay na ny fiasa stereo. Ho hitantsika izany amin'ny fanavaozana ny lozisialy amin'ny faran'ny taona.
Amboary ny feon'ireo fampiharana tsy miankina amin'ny Sound Control ho an'ny macOS
Ny Fanaraha-maso ny Feo dia ahafahantsika mitantana ny habetsahana sy ny fampitoviana ny fampiharana macOS tsirairay avy. Ny rindranasa dia apetraka eo amin'ny bara fizahana.
Raha misy orinasa sinoa tapa-kevitra ny hitovy amin'ny Apple dia Xiaomi ity. Isika rehetra eto dia efa mahalala azy avy ...
Tim Cook dia mampiroborobo ny programa amin'ny oniversite 70 eropeana
Apple CEO Tim Cook dia manangana programa hampiroborobo ny programa amin'ny sekoly 70 manerana an'i Eropa.
Disney dia manakarama mpanatanteraka iTunes teo aloha mba hampandeha ny sehatra fandefasana azy
Disney dia manakarama ny serivisy an'i Kevin Swint, mpiasa iTunes teo aloha ho filoha lefitra amin'ny Disney TV amin'ny ho avy, na serivisy streaming an'i Disney
Apple dia mamerina mandritra ny taona fahiraika ambin'ny folo nisesy teo an-tampon'ny laharana magazine Fortune
Apple dia mamerina mandritra ny taona fahiraika ambin'ny folo nisesy, eo an-tampon'ny magazine Fortune. Ny folo voalohany dia: Google, Amazon, Berkshire Hathaway, Starbucks, Walt Disney, Microsoft, Southwest Airlines, Fedex ary JPMorgan Chase
Avereno avereno jerena ireo processeur Skylake sy Kaby Lake aorian'ny fampiharana ny patch Spectre
Ny processeur Intel sasany dia mety hiaina olana, na ny reboot aza, aorian'ny fametrahana ny patch izay manakana azy ireo tsy hivoaka amin'ny Specter. Ireo mpikirakira Skylake sy Kaby Lake ankehitriny koa dia mety ho voakasik'izany.
Apple manova ny làlan'ny fiara fitateram-bahoaka ho fisorohana ny fanimbana
Tao anatin'izay andro vitsy lasa izay, dia nisy ny fanimbana natao tamin'ireo fiara fitateram-bahoaka izay nitondra ny mpiasan'ny Apple nankany Cupertino, ary namaky ny volana aza.
Apple dia namoaka ny beta fahenina amin'ny tvOS 11.2.5 ho an'ny mpamorona sy mpanandramana beta
Vao haingana i Apple no nanangana ny beta fahenina ho an'ny mpamorona sy ny mpanandramana beta ho an'ny tanjona fitiliana, ny ...
Western Digital dia manolotra ny G-Speed ​​Shuttle, ho an'ireo izay mila tahiry ivelany be dia be
Nampidirina ny boaty G-Speed ​​Shuttle miaraka amin'ny Thunderbold 3, izay mahazaka 4 bay sy 48TB. ny hafainganan'ny kapila dia 7200 RPM ary hatramin'ny 1000 MB / s novakiana
Androany 10 taona lasa hatramin'ny nanombohan'ny Steve Jobs ny MacBook Air voalohany
10 taona lasa izay taorian'ny nanoloran'i Steve Jobs ny MacBook Air. Izy io no ekipa mpandika lalàna indrindra tamin'izany fotoana izany noho ny hazavany, ny halavany, tsy fananany kapila kapila.
Martin Luther King, Jr dia mipoitra ao amin'ny tranokala Apple mahatadidy ny nahaterahany
Na iza na iza mpiaro ny zon'olombelona manao crusade tsy mahery setra mba hahazoana ny zon'ny olom-pirenena ...
Tonga ny HomePod vao manomboka manangona etona ny tsena, fikarohana hita
Araka ny fanadihadiana iray, ny HomePod an'ny Apple dia tonga amin'ny fotoana mety indrindra eny an-tsena, rehefa manomboka liana amin'ny mpandahateny mahay ny mpampiasa.
Amin'ny toerana maro any Espana dia iharan'ny tafio-drivotra isika izay manasarotra ny fiainana, saingy misy hatrany ...
Podcast 9 × 16: 2107 sy 2018, lasa sy ho avin'ny Apple
Nanomboka ny taona izahay ary nanomboka tamin'ny hafanam-po be dia be ny #Podcastapple izay efa fanaonay nandritra ny fotoana elaela niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminay ...
Nanamarina ny fiatraikan'ny Spectre sy Meltdown amin'ny Mac taloha
Nanao andrana tamin'ny Mac marobe tamin'ny 2011 sy 2013 ary rafitra fiasa samy hafa, mba hikajiana ny fihenan'ny fampisehoana ho an'ny Spectre sy Meltdown.
Satechi dia nanambara fa misy charger multi-port USB-C 2018w ao amin'ny CES 75
Satechi androany dia nanambara ny famoahana charger fitsangatsanganana USB-C 75W vaovao izay misy seranan-tsambo maro ...
Kitendry alimina vaovao ho an'ny Mac Matias RGB-Backlight
Te hanana keyboard backlit RGB ho an'ny Mac-nao ve ianao? Ny orinasa Matias dia maneho ny fahavononany vaovao amin'ity sehatra ity ao amin'ny CES 2018
Ny Alpine goavambe audio Alpine dia mandefa ny singa mitsingevana voalohany amin'ny CarPlay
Alpine dia nanolotra mpilalao haino aman-jery multimedia ho an'ny fiara, izay azo ovaina amin'ny fiara miaraka amin'ny efijery 6,1 ka hatramin'ny 7 inch izay misy CarPlay
ViewSonic dia manolotra mpanara-maso 8K sy 4K UHD miaraka amin'ny Thunderbold 3 Connection
Fanaraha-maso roa avy amin'ny trano ViewSonic no natolotra, miaraka amin'ny vahaolana 4K UHD sy 8K ary ny fifandraisana Thunderbold 3, miaraka amin'ny fahafaha-manatsara ny loko.
WD Ny tranoko rahona, famakafakana NAS tsy misy olana
WD My Cloud Home dia NAS kely izay manolotra antsika ireo fiasa rehetra ilain'ny ankamaroan'ny mpampiasa, amin'ny vidiny mirary sy amin'ny safidy fitahirizana maro.
Ny Apple Watch dia afaka mifehy ny asan'ny fitaovana Whirlpool
Modely Whirlpool maromaro ho an'ny taona 2018 no hanana fikajiana sy fitantanana kojakoja elektrika, avy amin'ny Apple watch
OWC dia mamoaka ny ThunderBlade V4 ho an'ny fitehirizana Ultra-Fast ho an'ny matihanina
OWC dia mitondra any amin'ny tsena ThunderBlade V4, fahatsiarovana mafy ny habe ary haingam-pandeha avo be. Natao ho an'ny asa ny fampiasana azy.
Ahoana ny fomba hanampiana iCloud Drive ao amin'ny dock an'ny Mac antsika ary hiditra avy amin'izany.
Tutorial mba hananana ny fampirimana iCloud Drive ao amin'ny Dock an'ny Mac antsika ary hiditra haingana amin'ny rahona Apple
Ny ekipa Soy de Mac dia mirary taona vaovao sambatra ho anao!
Alahady manokana ity Alahady ity ary vita ny 2017 ary manomboka ny taona 2018. Ao anatin'ny vitsivitsy monja ...
Tsy ampy intsony ny AirPods, fivoriana ankapobeny ataon'ireo tompon-tany ao amin'ny Steve Jobs Theatre, fanaovan-tsonia vaovao ao amin'ny Apple, Tidal ao amin'ny Apple TV ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Tonga ny andro hiarahan'ny olona an-tapitrisany mandany fotoana mahafinaritra. Betsaka no hanao an'ity ...
Tantano amin'ny Unibox ny mailakao, atolotra mandritra ny fotoana voafetra
Raha efa reraky ny Mail sy ny isan'ny fiasa voafetra ananany ianao, dia mety ho tonga ny fotoana hanandramana safidy hafa toa an'i Unibox
Apple dia manakarama mpanatanteraka telo hafa avy amin'ny Amazon Studios
Apple dia manohy mandray mpiasa vaovao hitarika ny sehatra streaming ho avy. Ireo sonia vaovao 3 dia avy amin'ny Amazon Studios
Manomboka amin'ny fanamby vaovao natolotry ny Apple ho an'ny mpampiasa Apple Pay ny taona 2018
Apple dia manolotra hetsika vaovao ho an'ny mpampiasa Apple Watch. Mandritra ny 7 andro misesy dia tsy maintsy fenointsika ireo peratra hetsika 3.
Lahatsary vaovao misy zahana drôna ao amin'ny Apple Park no mampiseho amintsika ny toerana misy azy ankehitriny
Amin'ity tranga ity, i Matthew Roberts dia miandraikitra ny fitondrana fitsidihana vaovao amin'ny kalitao 4k amin'ny alàlan'ireo efa ho vita ...
araka ny fanambarana nataon'ny US Securities and Exchange Commission, Apple dia hanao ny fivorian'ny General shareholder 'ny volana febroary izao ao amin'ny Steve Jobs Theatre.
Ny iray amin'ireo zavatra voalohany tokony ho vonona rehefa mividy drone marika DJI dia ny ...
Podcast 9 × 14: eo ny iMac Pro vaovao
Tamin'ity herinandro ity tao amin'ny #podcastapple dia niresaka lava momba ny iMac Pro vaovao izay afaka ora vitsivitsy monja ...
Apple dia namoaka ny fijerena Hirise Pro mety ho an'ny iMac Pro
Apple dia namoaka ny tendrombohitra monitor South South Hirise Pro, tonga lafatra ho an'ny iMac, ao anatin'izany ny iMac Pro na ny LG Ultrafine monitor
Voaroba androany ny magazay Colón Apple Store any Valencia
Tapitra androany ny tatitra mampalahelo ataontsika ary voaroba ny Apple Store ...
Amboary amin'ny fomba hafa ny Touch Bar amin'ny BetterTouchTool
Amin'ny BetterTouchTool dia azonao atao ny mitantana ny atiny ho hitanao eo amin'ny Touch Bar. Azonao atao ny manatsara ny efa misy na manampy ireo vaovao amin'ny alàlan'ny fampiharana.
Safari ho an'ny macOS dia mitady ny takelaka misokatra rehetra
Safari dia manana fiasa iray ahafahanao mitady eo anelanelan'ny teny amin'ireo takelaka rehetra misokatra ao amin'ny tranokala ho an'ny macOS
Safari Technology Preview dia tonga amin'ny kinova 45
Nisy zavatra iray hafa mihoatra ny tapa-bolana namboarina avy amin'ny Apple hanombohana ity kinova ity amin'ny browser browser Safari, hatramin'ny ...
Apple dia nahazo ilay fitaovana Podcast "Pop Up Archive"
Vao nahazo startup i Apple izay manolotra serivisy ho an'ireo mpamorona atiny ho an'ny fandaharana Podcast fantatra amin'ny hoe Pop Up Archive
Lesoka fiarovana MacOS, saribakoly Steve Jobs, fanomezana Apple Pay, macOS High Sierra 5 beta 10.13.2, sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Ary farany tonga ny Desambra ary miaraka aminy ny alahady voalohany amin'io ihany, Alahady somary tsy mampifanohitra ary ...
Nampidirina ny fenitra HDMI 2.1 izay mamela 48Gbps sy horonan-tsary hatramin'ny 10k
Nampidirina ny fenitra HDMI 2.1 izay hahafahantsika mahita horonantsary sy mihaino feo miaraka amin'ny tahan'ny fandefasana mihoatra ny avo roa heny amin'ny ankehitriny.
Podcast 9 × 12: Mila miala tsiny indray i Apple
Tao amin'ny podcast omaly alina dia niresaka lava momba ny olana lehibe momba ny fiarovana naseho ampahibemaso izahay tao amin'ny ...
Apple nanampy ny fizarana "Live Sports" amin'ny tvOS 11.2 beta
Ireo mpampiasa mampiasa ny kinova beta an'ny tvOS dia manana ny fampiasa Live Sports amin'ny fampiharana TV
Faharefoana lehibe hita tao amin'ny macOS High Sierra izay mamela ny fidirana amin'ny Mac tsy misy teny miafina
Nahita fahalemena iray izay misy fiatraikany amin'ny macOS High Sierra satria mamela ny fidirana amin'ny mpampiasa root ny atin'ny solosaina. Mampianatra anao ny famahana izany izahay.
Apple hanokatra fivarotana Downtown Brooklyn amin'ny faran'ny herinandro ho avy izao
Apple dia manokatra ny Apple Store any Downtown Brooklyn amin'ny andro manaraka fivarotana 2 isa 10 any New York ary 499 manerantany.
Raha tianao ny kitendry an'ny iMac Pro, ity misy kopian'ny endriny
Fantatray fa fitendry iray mitovy be amin'ilay hitantsika mialoha amin'ny iMac Pro. Manana keypad isa izy io ary mitovy ny lokony.
Makà sarivongana Steve Jobs, fahatsiarovana ny sasany amin'ireo famoahana Apple malaza
Afaka mahazo olo-malaza Steve Jobs amin'ny kalitao sy azo jerena amin'ny fampisehoana vokatra Apple tena izy isika.
Ny MacBook Pros 2018 dia mety hanana core 6
Intel dia afaka nanomana ny processeur MacBook Pro 2018, izay hanana 6 cores, mitazona ny fanjifana mitovy.
Unclutter, a 3 amin'ny 1 hitantanana ny birao
Misaotra an'i Unclutter, afaka miara-mitantana antontan-taratasy, naoty ary votoatin'ny clipboard miaraka aminay mora foana izahay.
Esory ny sary avy amin'ny pikantsary miaraka amin'ny fampiharana Screenotate ho an'ny macOS
Ny Screenotate dia rindrambaiko iray ahafahantsika mamoaka lahatsoratra amin'ny sary iray na mahazo haingana ny rohy avy amin'ny tranonkala.
Jonathan Ive dia hiteny amin'ny 29 Novambra any Washington
Jonathan Ive dia nomem-boninahitra tamin'ny magazine Smithsonian. Hanao lahateny miaraka amin'ireo mpikambana hafa momba ny ekosistra Apple izy.
Misokatra indray ny fivarotana Apple Burlingame taorian'ny fanavaozana lehibe
Misokatra ho an'ny besinimaro ny Apple Store malaza an'i Burlingame raha vao nohavaozina tamin'ny fironana Apple vaovao sy ny endriny
Ny sarintany Apple Maps dia hita any Portugal, Espana, Kroasia ary Sardinia
Ny fiara Apple dia manamafy ny fakana sary. Tamin'ity indray mitoraka ity dia afaka nahita azy tany Kroasia, Portugal, Madrid ary Barcelona izahay.
Ampiasao amin'ny alàlan'ny iTunes na Spotify fotsiny ny fanalahidy haino aman-jery ao amin'ny macOS High Sierra
Fantatsika ny rindranasa antoko fahatelo izay manakana ny fampiasana ny lakilen'ny multimedia amin'ny iTunes sy Spotify. Ity fihetsika ity dia tsy mitranga ao amin'ny macOS High Sierra.
9 × 10 Podcast: Olana sa fanitarana?
Amin'ity tranga ity, ny podcast #todoApple isa 10 dia miompana amin'ny sain'ny ...
Misy kinova vaovao momba ny Safari Technology Preview azo alaina
Ary izy ireo dia efa mandeha amin'ny kinova 44 an'ity fanandramana andrana ity avy amin'ny Apple, Safari Technology Preview. Amin'ity indray mitoraka ity amin'ny ...
Tombanana fa ny Apple dia nivarotra Apple Watch mihoatra ny 3,9 tapitrisa tamin'ny Q3
Ny orinasam-pikarohana momba ny tsena dia manombana ny varotra Apple Watch amin'ny 3,9 tapitrisa amin'ny Q3. Manodidina ny 800.000 ireo mpampiasa no nifidy ny andiany 3 niaraka tamin'ny LTE
Ny fandinihana iray dia mampiasa ny Apple Watch ho fitaovana hiasa amin'ny sleep sleep sy hypertension
Ny Apple Watch dia ampiasaina amin'ny fanadihadiana ao amin'ny University of San Francisco, mba hifehezana ny torimaso ary ny fiakaran'ny tosidra.
Tonga amin'ny fampiharana macOS ny fifanarahana zoma mainty
Izahay dia manana eo am-pelatananay ireo fampiasa fampiharana mitentina $ 493 amin'ny $ 30 fotsiny, miaraka amin'ny tapakila. Anisan'izany: Manam-pahaizana PDF sy Roxio Toast 16 Titanium.
Nike dia manolotra ny Apple Watch Nike + Series 3 miaraka amin'ny New Midnight Fog Band
Nike dia hanolotra amin'ny 14 Novambra, Apple Watch Nike + andiany 3 vaovao, miloko volondavenona ary fehiloha miloko mainty
Ny fanitarana ny fe-potoana fiverenan'ny Apple ho an'ny Noely dia efa ho latsaka
Amin'ireto daty ireto dia manitatra matetika ny vanim-potoana famerenana entana i Apple. Azo vinavinaina fa hanomboka ny 25 novambra ho avy izao.
Apple Watch backup, macOS beta 2, dock multi-charge ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Alahady iray amin'ny volana Novambra indray dia eto izahay hanolotra anao ny fanangonana vaovao izay isaky ny Alahady ...
Te hahita ny tranokala Apple ve ianao amin'ny 2001? Wayback Machine mamela anao
Ary tsy ny tranokala Apple ihany no misy ao amin'ity tahirin-kevitra goavambe hitantsika amin'ny Internet ity, ...
Tantano ny maody maizin'ny Mac misy anao amin'ny fampiharana Night Shifty maimaim-poana
Ny fomba maizina sy ny mari-pana amin'ny efijery Mac anao dia azo tantanana amin'ny fampiharana Night Shift maimaim-poana
Ampitomboy ny herin'ny sary an'ny MacBook Pro anao, miaraka amin'ny Sonnet Portable GPU
Sonnet dia manana vahaolana roa hanatsarana ny fahaizan'ny sary an'ny Mac anao. Izy io no vahaolana mety indrindra ho an'ny MacBook Pros raha mila manova sary na horonan-tsary ianao.
Apple dia namoaka horonantsary mozika Apple vaovao, hampiroborobo ny artista marobe
Apple Music dia namoaka horonantsary iray izay ahitana ny mpilalao sarimihetsika dia rakikira misy mpanakanto maro karazana. Apple Music dia hita ao amin'ny watchOS 4.1
MacOS 10.13.1 dia misy izao, ary koa iTunes 12.7.1 ao amin'ny Mac App Store
Namoaka ny kinova farany an'ny macOS High Sierra sy ny kinova 12.7.1 an'ny iTunes. Ny fanavaozana dia manamboatra bibikely ary mitondra emoji vaovao
Mandrosoa ny iPhone X, macOS beta 4 sy 5, Macs amin'ny taona 2018 sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Manamarika tanteraka ity herinandro ity ny fanombohana ny maodely vaovao an'ny iPhone X ary ny famandrihana dia ...
Raha manana APFS ianao dia mamorona snapshot ny rafitrao raha tsy manararaotra ny Time Machine
APFS sy macOS High Sierra dia mitondra ny safidy hanaovana sarin'ilay rafitra. Amin'ity lesona ity dia asehontsika anao ny fomba
Fanavaozana farany ny Lightroom 6, ny kinova fanontana sary manana fahazoan-dàlana maharitra
Fanavaozana farany ny Lightroom 6, avy amin'ny programa sary an'i Adobe. Ity no kinova farany azonao tratrarina tsy tapaka
Ireo mpiasan'ny Walmart dia hiara-hiasa amin'ny Mac manomboka amin'ny taona ho avy
Ny teknisianina Walmart Miles Leacy dia nanambara ny fividianana Mac 100.000 XNUMX ho an'ny mpiasa orinasa hampiasa manomboka amin'ny taona ho avy
Podcast 9 × 08: Eto ny iPhone X
Ao anatin'ny herinandro manan-danja isika ho an'ireo tia Apple sy iPhone manokana. Omaly alina tany ...
AI dia hamokatra hatramin'ny 13.000 tapitrisa amin'ny 2025, araka ny filankevitry ny teknolojia izay natrehin'i Apple
Ny filankevitry ny indostrian'ny haitao momba ny haitao, dia maminavina ny volan'ny orinasa 6 ka hatramin'ny 13 miliara ao AI amin'ny 2025
Miantehitra amin'ny Apple Watch Grant ny Vitality Insurance raha toa ka mihetsika ny mpanjifanao
Angela Ahrendts dia nilaza fa tsy izy no mpandimby an'i Tim Cook, ka nandà ny tsaho
Ny tsaho dia manambara an'i Angela Ahrendts, ho mpandimby an'i Tim Cook eo an-tampon-tanan'i Apple. Nanontaniana tamina resadresaka iray izy ary nolaviny izany
QacQoc GN30H, adaptatera ho an'ny zavatra rehetra ilainao
Ny QacQoc GN30H dia manangona ny fifandraisana rehetra ilainao amin'ny MacBook ho adapter tokana izay mifandray amin'ny USB-C laptop-nao.
Ny famokarana ny GPU izay antenaina ho entin'ny iMac Pro dia nitombo
Apple dia hampitombo ny baikon'ny karatra sary izay hitondra ny iMac Pro, izay ho hitantsika mialoha amin'ny volana Desambra.
Izahay dia nisedra ny tobin'ny fiambenana ho an'ny Apple Watch sy iPhone avy any Oittm [Review]
Eo amin'ny tsena ankehitriny ho an'ny kojakoja ho an'ny Apple Watch, iPhone, Mac ary fitaovana hafa ampiasaintsika isan'andro, dia misy ...
Elmedia Player sy fampidinana Folx voakasiky ny malware OSX / Proton
Elmedia Player sy ny programa fampidinana Folx dia mety ho voataona tamin'ny 19 Oktobra niaraka tamin'ny malware OSX / Proton
Adobe dia manolotra ny tetikasa Scribbler handoko ny sary mainty sy fotsy noho ny AI
Adobe dia nanolotra ny tetik'asa Scribbler ao amin'ny Adobe MAX 2017, afaka mandoko sary mainty sy fotsy afaka segondra vitsy.
Tsy maty ny Mac Mini, ho ela velona ny Mac mini
Tim Cook dia nanamafy tamin'ny mpampiasa iray tamin'ny alàlan'ny mailaka fa Apple dia miasa amin'ny fanavaozana ny Mac mini, saingy tsy manome antsipiriany bebe kokoa.
Ity no tranga ahafahanao manafatra ny kojakoja Apple
Raha mpanaraka mahatoky ny marika paoma ianao dia azo antoka fa mihoatra ny indray mandeha ianao no nieritreritra ny ...
Apple namoaka Safari Technology Review 42
Amin'ity tranga ity, ny kinova vaovao an'ny Safari Technology Preview dia efa azo alaina, raha vao 7 no lasa ...
Avy amin'ny mpamorona ny Fantastical, dia tonga ny Cardshop ho an'ny fitantanana fifandraisana
Tonga i Cardshop, hitantanana ny fifandraisana macOS amin'ny fikarohana mahira-tsaina, ny angon-drakitra ankoatry ny asa maro hafa
Microsoft Outlook for mac dia mandefa endrika endrika "notsorina", mitovy amin'ny fampiharana iOS
Manantena i Microsoft Outlook ho an'ny mac hanana interface iray tena mitovy amin'ny kinova iOS, ary hampifanaraka azy amin'ny sehatra hafa
Hita amin'ny Apple Maps izao ny fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka any Taiwan
Nataon'i Apple ho an'ny mpampiasa ny fitateram-bahoaka any Taiwan sy ny manodidina. Hahomby kokoa ny fahazoana mankaiza.
Logitech MX Ergo, mbola afaka manome ady be ny trackballs
Logitech dia manao protagonista trackball indray miaraka amin'ny MX Ergo, izay soloina ny totozy mahazatra sy ny trackpad izay mahaliana kokoa noho ny.
Podcast 9 × 06: Andao hiresaka momba ny headphones sy Bluetooth
Tamin'ity herinandro ity dia nanana podcast hafa noho ny mahazatra izahay ary toa tena malaza amin'ny mpihaino anay izany. Ny voalohany…
Kitiho ny horonan-tsarinao amin'ny H265, ny endrika vaovao noraisin'i Apple, miaraka amin'ny Super265
Mpanova horonantsary izay manova ny horonan-tsarinao amin'ny endrika vaovao noraisin'ny Apple H265. Tariho ary alatsaho ireo horonantsary ary kitiho hanovana azy ireo.
Antsipiriany misimisy kokoa momba ny Pixelmator Pro alohan'ny hanombohany ity horonantsary ity
Mahafantatra horonantsary vaovao misy fiasa Pixelmator Pro izahay. Amin'ity indray mitoraka ity dia manolotra ny fampidirana amin'ny macOS amin'ny fiasa toa ny Time Machine
Nandeha nankany India i Eddy Cue mba hitokanana ny Mac Lab vaovao
Nandeha nankany India i Eddy Cue hanolotra ny Mac Lab vaovao: fanofanana ny KM Music Conservatory miaraka amin'ny programa Logic Pro X.
Ny 15 TB MacBook Pros dia misy ankehitriny ao amin'ny tranokala nohavaozina amerikana
Ity dia manidy ny faribolan'ny Mac aseho amin'ity taona 2017 ity izay hita ao amin'ny faritra nohavaozina ao amin'ny orinasa ...
Ento miaraka aminao ity kitaponao Macbook na Macbook Pro anao ity
Tranga mitondra maivana sy kanto amin'ny fitondrana Macbook na MacBook Pro miaraka amina fiarovana 5 sosona, tsy tantera-drano mihitsy aza izy
Apple dia mikasa ny hanokatra ivon-toerana fanampiana mpamorona any Paris
Hanokatra ivon-toerana fanampiana ho an'ny mpamorona any Frantsa i Apple, ao amin'ny tranobe Station F, ilay trano anaovana ireo karazana tetikasa ireo
Award Tim Cook, fandefasana AirPods, Apple Watch ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Efa nandalo ny herinandro voalohan'ny volana oktobra isika ary mahita "fitoniana milamina" aorian'ny fanavaozana ...
BookBook CaddySack, hitahiry ireo kojakoja Mac anao
Ny CaddySack BookBook vaovao avy amin'ny South South dia mamela antsika hitahiry ireo kojakojam-bokintsika MacBook miaraka amina fomba tsy azo tononina
Adobe dia manolotra singa kinova Photoshop sy singa première 2018
Adobe dia nanolotra ny kinova rindrambaiko 2018 ho an'ny vao manomboka: Photoshop Elements sy Premiere Elements misy fiasa vaovao maro
Ny fiaran'ny Apple Maps dia any Ekosy sy Wales
Ny fiara Apple dia hanomboka hamakivaky an'i Ekosy sy Wales ao anatin'ny andro vitsivitsy, hanatsarana ny fiasa sy ny antsipirian'ny fampiharana Maps.
"Sary zaraina amin'ny iCloud" dia alefa ao amin'ny macOS High Sierra
Ny sary zaraina amin'ny iCloud dia singa iray amin'ny Photos, ilay macOS High Sierra app. Ireo sary nozaraina tao amin'ny iCloud dia navadika ho default
MacOS High Sierra Beta, HEVC, APFS File System ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Herinandro mahaliana amin'ny resaka vaovao mifandraika amin'i Apple ny herinandro farany tamin'ny septambra. Raha mbola miandry ny mpampiasa maro ...
Nanangona $ 13 tapitrisa ny vondrom-piarahamonina Apple noho ny vokatry ny rivodoza any Karaiba
Ny vondrom-piarahamonina Apple dia nanome 13 tapitrisa tamin'ny loza farany tany amin'ny faritr'i Karaiba. Nanampy ireo mpanjifa, mpiasa ary ny orinasa
Herinandro iray hafa dia anananay ho anao rehetra ny #PodcastApple izay nataonay niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminay amin'ny Actualidad iPhone ary amin'ity ...
Efa manana macOS High Sierra napetraka ao amin'ny Mac ve ianao? [Poll]
Telo andro no lasa ary ny kinova beta 1 voalohany ho an'ny rafitra fiasa macOS High Sierra 10.13.1 vaovao. Ao…
Miorina amin'ny hetsiky ny Apple amin'ny tranokalan'ny mpiasa, Thailand dia afaka mahazo Apple Store voalohany.
Fusion 10 sy Fusion 10 Pro dia azo alaina ao amin'ny macOS High Sierra
Fusion 10 sy Fusion 10 Pro dia mivoaka, mifanaraka amin'ny macOS High Sierra miaraka amina endri-javatra vaovao maherin'ny 30 sy ny fampidirana ireo takelaka
Mpamadika rindrina Aukey misy mpampifandray 4 hafa ho an'ny dia
Izahay dia miresaka momba ny vokatra atolotry ny orinasa Aukey ho anay amin'ireo fotoana tsy maintsy andehanantsika mankany ...
Mizarà tahirinao iCloud amin'ireo olona ao amin'ny fianakaviana ao amin'ny macOS High Sierra
Ny macOS High Sierra dia mamela antsika hizara ny famandrihana angon-drakitra miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny fianakaviana
Ny macOS High Sierra dia ahafahantsika manamboatra raha mizara fampahalalana amin'i Apple izahay hanatsarana ny rafitra
Navoakanay ny kinova farany an'ny macOS High Sierra nanomboka omaly, miaraka amin'ny vaovao betsaka noho ny andrasanao amin'ny ...
Apple Pay dia hifandray amin'ny tompon'andraikitra amin'ny fitaterana an-tanety, hampihatra ny fandoavam-bola amin'ny alalàn'ny Apple Pay, amin'ny lamasinina sy bus
Angela Ahrendts dia miakatra eo amin'ny vehivavy matanjaka indrindra araka ny gazety Fortune
Ny magazine Fortune dia mihevitra an'i Angela Ahrendts ho iray amin'ireo vehivavy matanjaka indrindra, miakatra amin'ny laharana anatiny sy ivelan'ny Apple.
MacBook Pro miaraka amin'ny RAM 32Gb dia tsy tonga raha tsy amin'ny taona 2018, noho ny fetran'ny fikirakirana Intel
Ireto MacBook Pros manaraka ireto dia mety tsy manana RAM 32 GB, raha toa ka voamarina ny fahatarana ny farihin'i Cannon andrasana amin'ny tapaky ny taona 2017
Jessica Alba, Sheryl Crow, Dierks Bentley, Gwyneth Paltrow, ary kintana will.i.am ao amin'ny Carpool Karaoke
Carpool Karaoke indray miaraka amina dokambarotra maromaro dia avy amin'ny fantsona YouTube an'i Apple. Ao…
Ampitomboy ny fiaraha-miasa Final Cut Pro X miaraka amin'ny Final Cut Library Opener
Ny fampiharana Final Cut Library Opener dia ahafahantsika mandroso ny fiaraha-miasa amin'ny alàlan'ny fandikana ny tranomboky hiasa amin'izany.
Apple dia mampiseho ny fifandraisanao amin'ny Apple Music ao amin'ny Apple Watch Series 3 amin'ity horonan-tsary vaovao ity
Lahatsary Apple vaovao mampiseho ny fiasan'ny andiany Apple Watch andiany 3 miaraka amin'ny LTE, mampiasa ny fampiharana Apple Music
Raha nanandrana ny APFS tamin'ny beta ampahibemaso ianao niaraka tamin'ny Fusion Drive dia mila miverina amin'ny endrika HFS + ianao
Raha nanandrana ny macOS High Sierra beta ianao ary manana Fusion Drive dia azo inoana fa hanana APFS ianao. Koa satria tsy manohana azy ny kinova farany dia tsy maintsy ovanao izany.
Apple Pay dia manohy ny fanitarana azy ary amin'ity banky ity any Dubai
Ny fanitarana ny Apple Pay dia mitohy tsy tapaka manerana an'izao tontolo izao ary androany ny fotoana hanambarana banky vaovao fa ...
Ny ankamaroan'ny orinasam-pamokarana dia hanavao ny atiny 4k ho an'ny Apple TV vaovao, afa-tsy Disney
Ireo mpizara sarimihetsika dia hanova ny atiny ho UHD maimaim-poana. Tsy hiakatra ny vidiny. Saingy Disney dia mijanona eo anilany.
Mitandrema amin'ny haitao OLED an'ny efijery iPhone X
Ny iPhone X dia fahombiazana dia zavatra izay tsy miafina amin'ny olona. Isika rehetra…
Ny vaovao dia aseho ao amin'ny Apple Store
Nanolotra ny vaovaon'ny Apple Store izay ho hitantsika amin'ny volana ho avy. Androany ao amin'ny Apple, ny fananganana an'i Apple, dia hanana toerana mifanaraka amin'izany.
Xiaomi dia manolotra ny Mi Notebook Pro, solosaina «Namboarin'i Apple»
Mazava daholo isika fa Xiaomi dia miavaka amin'ny endriny mitovy amin'ny an'ny Apple, mitranga izany amin'ny ...
Apple dia manohy mandray mpiasa matihanina amin'ny famokarana fandaharana amin'ny fahitalavitra
Apple dia manakarama mpitantana vaovao efatra ho iray amin'ny ekipa mpamokatra atiny audiovisual, izay ho hitantsika amin'ny taona 2018
Aiza no hanaovana backups: Time Machine na serivisy cloud?
Tombony sy fatiantoka amin'ny fomba samihafa hanaovana kopia voafafa ao amin'ny Mac. Ny Time Machine Editor dia mamela anao hanome isa matetika ao amin'ireo kopia
Craig Federigui no hiandraikitra ny fampandrosoana Siri manomboka izao
Apple dia nanangana ofisialy an'i Eddy Cue ho tompon'andraikitra amin'ny fampandrosoana ny Siri. Ao amin'ny baikon'ny mpanampy virtoaly an'i Apple dia miditra ao koa i Craig Federighi.
Midira haingana kokoa amin'ireo tranonkala avy amin'ny safari, noho ireo fiasa ireo.
Mitsitsia fotoana sy ezaka amin'ny fiasa "Paste and Go" sy "Paste and Find" ao amin'ny bara adiresy ao amin'ny Safari for macOS.
Eny, Sony koa dia hanana mpandahateny mahay miaraka amin'ny Google Assistant
Hitanay fa ireo mpifaninana amin'ny Amazon Echo, ilay mpandahateny Google, Google Home na Apple HomePod ...
Intel processeur voalohany izay ho hitantsika ao amin'ny iMac Pro
Intel dia manolotra processeur vaovao ho an'ny solosaina birao. Mety hahita ireo mpikirakira ao amin'ny iMac Pro hatolotr'i Apple amin'ny faran'ny 2017 isika
Ilay Fitbit Ionic vaovao dia te-hijoro amin'ny Apple Watch
Fitbit Ionic dia smartwatch vaovao te-hijoro amin'ny Apple Watch an'ny lehilahy Cupertino. Ity vaovao…
Manaiky fanomezana i Apple hiatrehana ny fahasimban'ny rivodoza Harvey
Apple dia manomboka ny fampielezan-kevitra amin'ny fanangonana fanomezana hanarenana an'i Hurricane Harvey. Ny fandraisana anjara dia atao amin'ny iTunes.
Mila backup ve ny Mac-nay ao anaty rahona?
Fanadihadiana raha mikasa ny hanana rafitra backup i Apple ao amin'ny rahona ny rafitra feno an'ny Mac
Samsung dia manao doka fa miasa amin'ny mpandahateny azy manokana hifaninana amin'ny Apple, Amazon, sns.
Ny iray amin'ireo mpanamboatra malaza eran-tany dia tsy afaka manadino ny fotoana fandefasana zavatra toa ...
Data Apple HomePod vaovao - natsangana tamin'ny iPhone na iPad tamin'ny voalohany
Amin'ny alàlan'ny fitaovana beta, dia fantatray ny antsipirian'ny HomePod an'ny Apple. Ny fampifanarahana dia hatao amin'ny alàlan'ny iPhone, na iPad.
Intel dia manambara ireo mpitrandraka amin'ny MacBook ho avy sy Macbook Pro
Vao nampiditra ny processeur faha-8 an'ny Intel i Intel, natokana ho an'ny solosaina finday noho ny fanjifany ambany sy ny fahombiazany.
Fampiratiana ny tombony sy ny fatiantoka noho ny andiany Apple Watch, angamba andiany 3, misy na tsy misy fifandraisana tsy misy tariby ataon'ny LTE
Data vaovao momba ny fihaonana eo amin'i Apple sy Aetna hanome Apple Watch
Nambara ny antsipirian'ny vaovao momba ny fihaonana eo amin'i Apple sy Aetna. Voaresaka ny olan'ny tsiambaratelo ary ny vidin'ny fitaovana ho an'ny mpanjifa Aetna.
HomePod dia hanana singa vitsivitsy amin'ny fanombohana, fampitomboana ny famokarana amin'ny taona 2018
Raha ny filazan'ny Inventec Appliances, mpanamboatra an'i Apple, ny famokarana HomePod dia ho ferana amin'ny taona 2017, ary hitombo amin'ny taona 2018
Apple Maps dia efa manana ny fanohanan'ny fitateram-bahoaka any Hongria
Apple Maps dia mampiditra ny fanohanan'ny fitateram-bahoaka any Hongria. Angony ny tanàna lehibe, na ao anatiny na ivelan'izy ireo.
Miarahaba anao Steve Wozniak! Androany 67 taona
Iray amin'ireo mpilalao fototra amin'ny Apple voalohany dia tsy isalasalana fa Steve Wozniak. Ity injeniera ity izay amin'ny ankapobeny ...
Ny mpiasan'ny Apple Park sasany dia mandefa sary sy horonan-tsary amin'ilay rakotra ao amin'ny Snapchat
Ary tsy miresaka momba ny mpiasa ao amin'ny biraon'ny Apple, fa ny mpiasa miandraikitra ny ...
Tolo-kevitra vaovao, izay natolotry ny frantsay sy alemà indrindra, dia mangataka amin'ireo bandy Cupertino hanova ny fomba tokony ...
Apple dia namoaka beta 5 an'ny macOS High Sierra vaovao ho an'ny mpamorona
Apple dia namoaka androany ho an'ny mpamorona ny beta fahadimy amin'ny fanavaozana manaraka ny macOS High Sierra tapa-bolana ...
Ny horonantsary promo vaovao alohan'ny famoahana ny Apple Music dia mampiseho an'i Will Smith sy James Corden izay mifaly.
Ahoana ny fanontana ny atin'ny tranonkala tsy misy doka amin'ny Safari for Mac
Fiasa Safari ho an'ny Mac izay ahafahantsika manonta rakitra na mamorona PDF, tsy misy dokam-barotra na singa ivelany amin'ny lahatsoratra lehibe
Te handefa sarimihetsika na andian-tsarimihetsika maimaimpoana amin'ny iPhone na iPad-nao ve ianao? Araho ity torolàlana ity izay hanehoanay anao ny fomba fampidinana sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika amin'ny fitaovan'ny iOS anao
Mampitombo ny famokarana Airpods ny Apple, hoy i Tim Cook
Tamin'ny famelabelarana ny valin'ny Q3 2017 dia nanambara i Tim Cook fa nitombo ny famokarana ireo airpods. Mbola 6 herinandro ny fiandrasana
Ny valin'ny Q3 2017 an'ny Apple dia mifanaraka amin'ny andrasana
Apple dia nanolotra ny valin'ny telovolana fahatelo, nitombo 7% ny varotra ary nankafizin'ny tsena izany.
Tranofiara vaovao ho an'ny Carpool Karaoke, alohan'ny fandaharana amin'ny 8 Aogositra
New Apple trailer ho fampiroboroboana ny Carpool Karaoke: ny programa andiany, izay hanomboka amin'ireo olo-malaza isan-karazany amin'ny 8 aogositra.
Ny fohy an'ny The Rock (La Roca) miaraka amin'i Siri dia hita amin'ny teny espaniola izao
Andro vitsy lasa izay, Apple, niaraka tamin'ny mpilalao fanta-daza Dwayne Johnson, dia nandefa doka fohy ho dokam-barot